Ny fifanarahana vaovao PHANTOM no hifaninana amin'ny Tselatra Network - Blockchain News
Ny mpamorona ny protocols SPECTER sy ny MASINA Jonathan Sompolinski sy Aviv Zohar fifanarahana momba ny vaovao ao amin'ny tahirin-kevitra namoaka ity herinandro ity. Mampanantena ny PHANTOM protocole fanamafisana ny fifanakalozana azo antoka “na oviana na tambajotra passante”, anisan'izany ny manan-tsaina fifanarahana. Ny vaovao dia mifototra amin'ny fampivoarana ny teo aloha ihany vahaolana amin'ny didy, SPECTER, izay miainga avy ao amin'ny andian-tsoratra nentim-paharazana sy ny firafitry ny bitcoin mampiasa kokoa scalable “acyclic nitarika andian-tsoratra kisary” (blockDAG). Mpikaroka mamaritra ny teknolojia ho toy “ny generalization ny Satoshi rojo, izay mifanaraka tsara kokoa ho an'ny rafitra amin'ny fifadian-kanina na biriky lehibe.”
Tsy toy ny vahaolana ivelan'ny aterineto toy ny helatra Network, raha misy natao tamin'ny varotra ny add-eo amin'ny tambajotra, Phantom manolotra vahaolana mpanjifa-monina izay mamela anao handao rehetra transactional angon-drakitra momba ny blockroom.
Araka ny mpanoratra, ny tena mampiavaka ny PHANTOM dia azo atao fa mahatonga ny Linear firafitry ny kilalao miendrika biriky, izay SPECTER tsy navelan'ny. Ho an'ity, dia mampiasa ny “tia vola algorithm” eo amin'ny sehatra sy ny mampiavaka blockDAG kilalao miendrika biriky niteraka ny “marina” nodes avy “tsy miara-miasa” nodes izay hihataka amin 'ny harena ankibon'ny tany fifanarahana. Rehefa manoratra ny mpandraharaha, fahasamihafana izany dia mamela rehetra “marina nodes” ny fanapahan-kevitra iombonana. Famahana ny olana ny Linear Ordering mamela PHANTOM tena habeny misy kajy, anisan'izany ny manan-tsaina fifanarahana.
Sompolinski sy Zohara manaiky fa noho ny Linear Ordering, PHANTOM namono zavatra hatao fanatitra ny raharaham-barotra ny tahan'ny fandraisana ho mpikambana, izay nanan-tombo teo amin'ny teo aloha SPECTER fifanarahana. Fa ny mpikaroka handeha mba hamahana ity olana ity amin'ny asa ho avy.
Previous Post:Voalohany Kanada Blockchain ETF eken'ny dalàna
Next Post:Litecoin dia